देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति ? – TV Today Nepal
टोकियो ओलम्पिकमा ९५ स्वर्ण पदकको छिनोफानो, जापान शीर्ष स्थानमा यथावत
गृह पृष्ठ/विशेष/देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति ?
टिभी टुडे न्यूज ३ श्रावण २०७८, १५:५५
३ साउन, काठमाण्डौ । आज बस्न लागेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै उहाँले विश्वासको मत लिने अनुमान गरिएको थिएन । किनकी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनासम्म विश्वासको मत लिने सुविधा उहाँलाई छ । तर सबैले अनुमान गरे विपरीत उहाँले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । एमालेमा पार्टी एकताको पहल भैरहेको र यो पहल सफल भएमा पछि विश्वासको मत पाउन नसकिने भएकाले देउवाले हतार गर्नुभएको बुझिएको छ । त्यसो त मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उहाँले मन्त्रिपरिषद विस्तारभन्दा पहिले विश्वासको मतलाई प्राथमिकता दिंदै आउनुभएको छ । यसबीचमा उहाँले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्नुभएको छ । नेता नेपाल पक्षबाट विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित भएपछि उहाँले आजै प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विज्ञप्ति नै निकालेर देउवालाई विश्वासको मत दिन आह्वान गर्नुभएको छ भने नेपाल समूहका सांसदहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् ।
१५ श्रावण २०७८, १७:०१
१५ श्रावण २०७८, १६:५४
१४ श्रावण २०७८, ०८:०२
१४ श्रावण २०७८, ०७:३६
१३ श्रावण २०७८, १२:५६